192.168.8.1 -Uyifumana njani indlela emiselweyo ye-IP?
Uyifumana njani i-IP engapheliyo yomzila?
Ukuqwalasela i-router yakho, kuya kufuneka ungene kuyo. Yenza njalo, kuya kufuneka uyiqonde idilesi ye IP. Unokuqinisekisa ukuba idilesi ye-IP engagqibekanga. Idilesi ye-IP inamanani ama-4 ahlukaniswe ngokuma ngokupheleleyo. Idilesi ye-IP yendawo yenethiwekhi iya kuqala nge-192.168. Ngokwesiqhelo iiRouters zibandakanya iidilesi ze-IP ezinje nge-192.168.0.1 okanye i-192.168.1.1. Kuxhomekeka kwikhompyuter okanye isixhobo, indlela oza kuyifumana ngayo idilesi ye-IP yomzila iya kwahluka. Apha ngezantsi kukho amanyathelo nganye nganye.
Okokuqala, kufuneka uzicacise ngala magama ma-2- "umzila we-IP" kunye "nendlela emiselweyo ye-IP." Imisebenzi ye-IP yomzila njengokungena phakathi kwezixhobo zakho kunye ne-intanethi ebanzi yiyo loo nto inokwaziwa ngokuba yi "Idilesi yesango engagqibekanga ye-IP. ” Zonke izixhobo ezinxibelelene nenethiwekhi efanayo zidlulisa iimfuno zazo ngokungagqibekanga kwi-router. Izixhobo ezahlukeneyo ziya kuthi igama ngokwahlukileyo. IiWindows PCS ziya kuyibiza ngokuba 'yindlela emiselweyo' ngelixa izixhobo ze-iOS ziya kugcina umzila wedilesi ye-IP engezantsi 'kwendlela.'
Emva kokuba ufumene i-IP engagqibekanga kwi-IP, unokuyibhala nje kwi-bar yebrawuza yewebhu ukungena kwi-interface yewebhu.
Yiya kumyalelo okhawulezileyo ngokufumana kwakhona ibha yokukhangela kunye nokubhala 'cmd'. Ifestile emnyama ibonakala apho uza kufuna ukubhala 'ipconfig'. Idilesi yesango emiselweyo ukukhangela iziphumo.
Apha ngezantsi kukho amanyathelo alula ukujonga umzila we-IP:
Cinezela iapile imenyu (phezulu kwesikrini)
Khetha 'Inkqubo yokuqala'
Khetha ikhonkco lenethiwekhi elisebenzayo
Tyhala 'TCP / IP'Ukubona idilesi ye-IP kwi-router eyiyo
Okokuqala, fumana indlela eya: IiNkqubo> Izixhobo zeNkqubo> iTheminali & bhala 'ipconfig'. Uya kufumana i-IP yomzila edweliswe ngaphandle kwe 'inet addr'.
Ukuba usebenzisa i-iOS8 okanye i-iOS9, ujonge kuseto> iWiFi kwaye ucofe iinethiwekhi ezingenazingcingo oncamathele kuzo ngoku. Kungenzeka ukuba icandelo le-DHCP lifumaneke kwi-IP yomzila.
Inkqubo yomntu wesithathu eyaziwa ngokuba yiWi-Fi Analyzer yeyona ndlela ilula yezixhobo ze-Android. Ukulandela ukunxibelelana neapp, shaya kwimenyu 'yokujonga' kwaye ukhethe 'uluhlu lweAP'. Uya kujonga 'edityaniswe kwi: [Igama leNethiwekhi]'. Ukuba uyabetha kuyo, iwindow iboniswa ngolwazi lwenethiwekhi nge-IP yendlela.
Kwibar yomsebenzi, cinezela indawo yokulumkisa. Emva koko, cinezela uqhagamshele kwi [Igama leNethiwekhi] 'kuluhlu oluvelayo. Betha igama lothungelwano olungenazingcingo ngokulandelayo kwilebheli 'yeNethiwekhi' ukubonisa ukuwa kunye nedilesi ye-IP yomzila.
Indlela yokufumana i-IP engapheliyo yomzila
Ukufumana idilesi ye-IP emiselweyo yomzila landela nje amanyathelo angezantsi anikiweyo -
1) yomsebenzi webar yomsebenzi Ndwendwela imenyu yokuQala kunye negalelo CMD kwindawo yokukhangela.
2) emva kokuba ufake umyalelo we-CMD, umyalelo okhawulezayo ngomboniso omnyama uya kutyhila.
3) Bhala umyalelo 'ipconfig', Kumyalelo okhawulezileyo. Lo myalelo ubandakanya- bonisa useto lwe-IP olungagungqiyo kunye noqwalaselo lwenkqubo kunye ne-router eqhagamshelwe kuyo.
Indlela yokufumana i-IP yedilesi kwi-Windows
Bhala kwiPaneli yokuLawula kwibha yokukhangela kwaye cinezela kwi icon Iphaneli yokulawula;
Cinezela Jonga inqanaba lenethiwekhi kunye nemisebenzi engezantsi Intanethi kunye nenethiwekhi;
Cinezela kwigama le-Wi-Fi, onokufumana kufutshane noQhagamshelo;
Iwindow yakutshanje iya kuvela. Cinezela kwiinkcukacha;
Uya kuyifumana kwabelwana ngedilesi ye-IP kwi-IPv4 Isango elingagqibekanga.
iindidi Kwenziwa kanjani Post yokukhangela